काठमाडौँ । संसारमा, जीवनको गुणस्तर मात्र होइन, मृत्युको गुणस्तर पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
राम्रो जीवन बिताएपछि हाम्रो सास पनि सहजै बन्द होस् भन्ने आशा हामी सबैलाई छ, तर उच्च आय भएका देशका जनताका लागि यो यथार्थ भए पनि न्यून आय भएका देशका जनताका लागि यो सपना मात्रै हो । यस्तो किन हुन्छ, यसको जवाफ हालै वैज्ञानिकहरूले क्वालिटी अफ डेथ एन्ड डाइङ इन्डेक्स २०२१ मार्फत दिएका छन् ।
यो अध्ययन अमेरिकाको ड्युक युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले गरेका हुन् । यसमा विश्वका ८१ देशलाई जीवनको अन्तिम हेरचाहको आधारमा ए, बी, सी, डी, ई, एफ ग्रेड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा ६ देशले मात्र ए ग्रेड पाएका छन् भने २१ देशले एफ ग्रेड पाएका छन् ।
सूचीको शीर्षमा कुन देशहरू छन्?
यो सूचकांकमा बेलायत पहिलो स्थानमा छ । यसबाहेक आयरल्यान्ड, ताइवान, कोस्टारिका, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियाले पनि ए ग्रेड पाएका छन् । रिपोर्टका अनुसार यी देशहरूमा बस्ने मानिसहरूले आफ्नो अन्तिम दिनमा राम्रो शारीरिक र मानसिक स्याहार पाउँछन् ।
कुन देशले सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरे ?
पराग्वेलाई ८१औँ स्थानमा राखिएको छ, अर्थात् यहाँका जनताले शान्तिसँग अन्तिम सास फेर्न पनि असमर्थ छन् । बंगलादेश, लेबनान, हाइटी, ब्राजिल, सेनेगल, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, आर्मेनिया, अर्जेन्टिना, नेपाल, सुडान, मलेसिया, इथियोपिया र इराक पनि एफ ग्रेड सूचीमा परेका छन् ।
यस सूचकाङ्कमा भारत डी ग्रेडसहित ५९औँ स्थानमा छ । भारतबाहेक चीन, रुस, ग्रीस, इन्डोनेसिया, चिली, जर्जिया, भियतनाम र मेक्सिकोले पनि डी ग्रेड पाएका छन् । अचम्मको कुरा, अमेरिका सी ग्रेडको साथ ४३औं स्थानमा छ । अमेरिकासँगै कोलम्बिया, म्यानमार, मेक्सिको, थाइल्याण्ड, इजिप्ट, घाना, इजरायल, युगान्डा, डेनमार्क र नाइजेरिया पनि सी ग्रेडमा परेका छन् ।
अनुसन्धानकर्ता स्टीफन कोनर भन्छन् कि उच्च आय भएका देशहरूलाई राम्रो ग्रेडमा समावेश गर्नु कुनै संयोग होइन । यहाँका सरकारहरूले अन्य देशको तुलनामा नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्छन् । ग्रेड राम्रो नभएका देशका सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिन जरुरी छ । उच्च आय भएका देशको तुलनामा यहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाको एक तिहाइभन्दा कम छ ।
अमेरिकाको उदाहरण: पैसा सबै कुरा होइन
कोनर र उनका साथी अनुसन्धानकर्ता एरिक फिन्केलस्टेन भन्छन् कि यस अनुसन्धानमा धेरै ए ग्रेड देशहरूमा बलियो अर्थतन्त्र भए पनि पैसा सधैं सबै कुरा होइन । उनले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै कहिलेकाहीँ पैसा भएमा जीवनको अन्तिम दिनमा राम्रो हेरचाह हुने ग्यारेन्टी नहुने बताए ।
फिन्केलस्टेन भन्छन् कि तपाई जुन समाजमा बस्नुहुन्छ, त्यहाँ अन्तिम मिनेटको हेरचाह पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार विकसित र विकासोन्मुख दुवै मुलुकमा यो अवस्था राम्रो छैन । मानिसहरु आफ्नो अधिकांश पैसा जीवन जिउनमा खर्च गर्छन्, त्यसैले जीवनको अन्तिम पलहरु आफ्नो रोजेको ठाउँमा बिताउनु र उपचारको अभावमा उनीहरुको बाध्यता बन्छ ।